सिद्ध बनाइनुपर्नेहरू शोधनको प्रक्रियाबाट भएर जानैपर्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जब तँमाथि परीक्षाहरू आउँछन्, तब ती परीक्षाहरूको सामना गर्न तैँले कसरी परमेश्‍वरको वचन प्रयोग गर्नेछस्? तँ नकारात्मक बन्‍नेछस्, कि परमेश्‍वरले मानिसलाई गर्नुहुने जाँच र शोधनलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्छस्? परमेश्‍वरका जाँचहरू र शोधनहरूबाट तैँले के प्राप्त गर्नेछस्? के परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेम बढ्नेछ? जब तँ शोधनमा पर्छस्, के तँ अय्यूबका जाँचहरू प्रयोग गर्न अनि परमेश्‍वरले तँमा गर्नुहुने कार्यमा गम्भीरतासाथ संलग्न हुन सक्छस्? परमेश्‍वरले अय्यूबका आपत्-विपदहरूद्वारा मानिसलाई कसरी जाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तँ देख्न सक्छस्? अय्यूबका जाँचहरूले तँलाई कस्तो किसिमको प्रेरणा दिन्छ? के तँ शोधन भइरहेको बेला परमेश्‍वरका निम्ति साक्षी भई खडा हुन इच्छुक हुनेछस् वा के सहज वातावरणमा शरीरलाई सन्तुष्ट पार्न चाहनेछस्? परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेबारे तेरो वास्तविक दृष्टिकोण के हो? के त्यो साँच्चै उहाँको निम्ति हो तर शरीरका निम्ति होइन? के तँसित साँच्चै एउटा लक्ष्य छ, जसको पछि तँ लाग्छस्? के तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिनलाई शोधनबाट भएर जान चाहन्छस्, वा तँ परमेश्‍वरद्वारा सजाय र सराप पाउन चाहन्छस्? परमेश्‍वरको साक्षी बन्ने विषयमा तेरो वास्तविक दृष्टिकोण के हो? परमेश्‍वरको साँचो साक्षी दिनका निम्ति मानिसहरूले विशेष परिस्थितिहरूमा के गर्नुपर्छ? व्यावहारिक परमेश्‍वरले तँमा गर्नुभएको उहाँको वास्तविक काममा धेरै कुरा प्रकट गर्नुभएको छ भने तँ किन सधैँ छोडेर जाने विचार गर्नुहुन्छ? के तँ परमेश्‍वरलाई परमेश्‍वर नै ठानेर विश्‍वास गर्छस्? किनकि तिमीहरूमध्ये धेरैको निम्ति, तिमीहरूको विश्‍वास तिमीहरूको आफ्‍नै फाइदाको लागि तिमीहरूले गर्ने तिमीहरूको आफ्नै अनुमानको हिस्सा हो। थोरै मानिसले मात्र परमेश्‍वरलाई परमेश्‍वर नै ठानेर विश्‍वास गर्छन्; के यो विद्रोह होइन र?
कहिलेकहीँ परमेश्‍वरले तँलाई एक निश्‍चित प्रकारको अनुभूति दिनुहुन्छ, यस्तो भावना जसको कारण तैँले आफ्नो भित्री आनन्द र परमेश्‍वरको उपस्थिति गुमाउनुपर्छ, जसले गर्दा तँ अन्धकारमा डुब्छस्। यो एक किसिमको शोधन हो। जब-जब तँ केही गर्छस्, तब त्यो सधैँ गलत हुन जान्छ वा तेरो सामु बाधा खडा हुन्छ। यो परमेश्‍वरको अनुशासन हो। कहिलेकहीँ, जब तँ परमेश्‍वरप्रति अनाज्ञाकारी र विद्रोही कार्य गर्छस् त्यो अरू कसैलाई थाहा नहुन सक्छ—तर परमेश्‍वरलाई थाहा हुन्छ। उहाँले तँलाई त्यसै छोडिदिनुहुनेछैन, उहाँले तँलाई अनुशासनमा राख्‍नुहुनेछ। पवित्र आत्माको काम धेरै विस्तृत छ। उहाँले मानिसहरूको प्रत्येक बोलीवचन र कार्यलाई, तिनीहरूका प्रत्येक व्यवहार र चाललाई, तिनीहरूका हरेक विचार र योजनालाई ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ, ताकि मानिसहरूले यी कुराहरूको आन्तरिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकून्। तैँले एक पल्ट कुनै कुरा गर्छस् र त्यो गलत हुन्छ, तँ फेरि कुनै काम गर्छस्, अनि त्यो अझै गलत हुन्छ, अनि बिस्तारै तँ पवित्र आत्माको कामलाई जानेछस्। धेरै चोटि अनुशासनमा परेपछि तैँले परमेश्‍वरको इच्छासँग मिल्दो हुन के गर्नुपर्छ र कुन कुरा उहाँको इच्छासँग मिल्दोजुल्दो हुँदैन सो जान्‍नेछस्। अन्त्यमा, पवित्र आत्माको अगुवाइप्रति तेरो भित्रैबाट निस्केको सटीक प्रतिक्रिया तँमा हुनेछ। कहिलेकहीँ तँ विद्रोही बन्‍नेछस् र परमेश्‍वरले तँलाई भित्रैबाट हप्काउनुहुनेछ। यो सबै नै परमेश्‍वरको अनुशासनबाट आउँछ। यदि तँ परमेश्‍वरको वचनलाई बहुमूल्य ठान्दैनस् भने, यदि तैँले उहाँको कामलाई अनादर गरिस् भने, उहाँले तँलाई कुनै ध्यान दिनुहुनेछैन। परमेश्‍वरको वचनलाई तैँले जति गम्भीरतासाथ लिन्छस्, उहाँले तँलाई त्यत्ति नै बढी अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ। अहिले, चर्चमा केही मानिसहरू छन् जसमा भद्रगोल र भ्रमित विश्‍वास हुन्छ, अनि तिनीहरूले अनेक अनुचित कार्यहरू गर्छन् र अनुशासनहीन व्यवहार गर्छन्, यसैले तिनीहरूमा पवित्र आत्माको कामलाई स्पष्ट रूपमा देख्न सकिँदैन। कतिपय मानिसहरूले अनुशासनमा नरहिकन गएर व्यवसाय गर्दै, पैसा कमाउनको खातिर आफ्‍ना कर्तव्यहरूलाई त्यागेर जान्छन्। यस किसिमको मानिस अझ बढी खतरामा हुन्छ। तिनीहरूसँग अहिले पवित्र आत्माको काम नहुने मात्र होइन, तिनीहरूलाई सिद्ध बन्न भविष्यमा पनि गाह्रो पर्नेछ। धेरै जना मानिसहरू यस्ता छन्, जसमा पवित्र आत्माको काम देख्‍न सकिँदैन र जसमा परमेश्‍वरको अनुशासन देख्न सकिँदैन। तिनीहरू ती हुन् जसले परमेश्‍वरको इच्छालाई स्पष्ट रूपमा जान्दैनन् र उहाँको काम जान्दैनन्। जो शोधनको बीचमा अटल भई बस्छन्, परमेश्‍वरले जस्तोसुकै कार्य गर्नुभए पनि जो उहाँको पछि लाग्छन्, र कम्तीमा पनि छोड्न सक्दैनन्, वा जसले पत्रुसले हासिल गरेको कामको ०१.% हासिल गर्दछन्, तिनीहरूले राम्रै गरिरहेका हुन्छन्, तर परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुने सम्बन्धमा तिनीहरूको कुनै मूल्य हुँदैन। धेरै जना मानिसहरूले परिस्थितिलाई चाँडै बुझ्दछन्, तिनीहरूमा परमेश्‍वरप्रतिको साँचो प्रेम हुन्छ, र पत्रुसको स्तरलाई उछिन्छन्, र परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई सिद्ध पार्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूमा अनुशासन र ज्ञान आउँदछ, यदि तिनीहरूमा परमेश्‍वरको इच्छासँग नमिल्ने केही छ भने त्यो तिनीहरूले तुरुन्तै फाल्न सक्छन्। त्यस्ता मानिसहरू सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू हुन्—तिनीहरूको मूल्य अति उच्च हुन्छ! परमेश्‍वरले धेरै किसिमका कामहरू गर्नुभएको छ, तर तँ अझै पनि बालुवा र ढुङ्गाजस्तो छस् भने, तँ मूल्यहीन छस्!
अर्को: कष्टपूर्ण परीक्षाहरू अनुभव गरेपछि मात्र तैँले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन जान्न सक्छस्